Nin goor dhow lugu dhaawacay xaafadda Hjällbo ee magaaladda Göteborg | Somaliska
Nin goor dhow lugu dhaawacay xaafadda Hjällbo ee magaaladda Göteborg
Magaaladda Göteborg oo ah caasimadda labaad ee dalkaan Iswiidhan, ayaa caawa fiidkii waxaa lugu dhaawacay nin da’diisa lugu sheegay 3o jir, ninkan ayaa loola cararay isbitaalka, ka dib markii xabad xabadka looga dhiftay.
Ciidamo boolis ah oo adeegsanayey helikobtar iyo eeyo ayaa gaaf wareegaya halkii uu ka dhacay weerarka, iyadoo raggii falkaasi geeystay ay ku baxsadeen mootooyin. Nin goob jooge ah oo u waramayey wargeyska Gothenburg Post ayaa u sheegay inuu arkay booliska oo qori kuwa udhaca atomomaatik-ga ay ka soo heleen meel u dhow agagaarka madaxadda tareenka laga raaco ee ku taala xaafaddaasi Hjällbo. Booliska ayaa sidoo kale waxaa ay garaacayeen guryaha iyagoo ku raad jooga xabado.
Baabuuro ayaa sidoo kale wararku sheegayaan in la gubay booliskuna waxaa ay baarayaan in ay la xirriirto dhaawaca ninkaas loo geeystay. Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in ninka la dhaawacay uu ahaa nin soomaali ah. Saacadaha soo socda ayaa shabakadda Somaliska ay idiin soo gudbin doontaa macluumaad intaas ka badan oo la xirriira ninkaasi soomaaliga ah.